मनोकामना माताले सबैको कल्याण गरुन, शुक्रबार माघ १२/जनवरी २६ को राशिफल
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल माघ १२ गते शुक्रबार इश्वी सन २०१८ जनवरी २६ तारीख माघशुक्ल पक्ष नवमी तिथी ८ः५३ बजे सम्म पश्चात दशमी तिथी चन्द्रमा मेष राशिमा प्रातः ९ः१३ बजे सम्म पश्चात बृष राशिमा सुर्य उत्तरायण शिशिर द्रोणनवमी वैतडी,गुजरमा बनारसीपूजा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस – ज्यो.पं . सरोज घिमिरे
बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । मध्यान पश्चात मान प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेयोग परेकोछ । दाम्पत्य शुखमा कमि आउनेछ। मान्यजन को साथ प्राप्त हुनेछ ।
मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । मध्यान पश्चात कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । दाम्पति बिच सामान्य कलह रहने सम्भाबना रहन सक्छ ।
ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । मध्यान पश्चात मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
अरुको दबाबको कारण मानशिक समस्या आई पर्ने छन् । पठनपाठनमा भने समय राम्रो रहेको छ । मध्यान पश्चात नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । परीश्रमको राम्रो फल प्राप्त होला ।